यी राशिका पुरुषले श्रीमतीलाई बनाएर राख्छन् रानी – Krazy NepaL
November 22, 2021 140
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् । जुन राशि भएका पुरुहरूले आफ्नो श्रीमती, प्रेमिका को हरेक दुख सुख, खुसीमा साथ दिने र रमाउने हुन्छन्।
उनीहरू श्रीमती, प्रेमिकाको प्रेममा पागल समेत बन्न सक्छन्। यस्ता राशि भएका पुरुषले जीवनमा आफ्रनो श्रीमतीको हरेक इच्छा,चाहाना पुरा गर्न सफल भएका हसन्छन्। आफ्नो श्रीमती लाइ धेरै माया गर्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले पुष्टि गरेको छ।
ती राशि कुन कुन हुन् त ?
यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन्। आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन्। सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन्।
ज्योतिषी सुराचार्यका अनुसार परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पागल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् ।
यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनाले एकअर्काको प्रेममा पागल हुने गर्छन्।
एकअर्काको समस्या बुझ्ने र एक अर्काको समस्या पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरुको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ। यो राशी भएका पुरुषहरु बफादार हुने भएकाले पत्नीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ।
उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन्। तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जि’द्दी र रिसा’लु स्वभावका हुन्छन्।
यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन्।
खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ। उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन्।
घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन्।
Prevधन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस
Next“बिहान उठ्दा’ ना’क बन्द हुने र घांटी ख’सखसा’उने गरेको छ भने’ बेवास्ता’ नगर्नुहोस।
साउन १ गते’बाट शुक्र तुला रा’शि’मा रहने, यी ४ रा’शि हुनेछन् मा;ला’मा’ल !
“दुखद खबर : मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्ड जिवन तामाङको सुतेको अवस्थामा मृत्यु”